‘बाँकेमा संक्रमण दर उच्च छ, बेवास्ता गरे ठूलो महामारी निम्तिन सक्छ’ – email khabar | Latest news of Nepal
‘बाँकेमा संक्रमण दर उच्च छ, बेवास्ता गरे ठूलो महामारी निम्तिन सक्छ’
प्रकाशित : २०७८ वैशाख १२ गते ११:५१
पश्चिम नेपालको बाँके पछिल्लो समय कोरोनाको हटस्पट बनेको छ । यहाँ दैनिक सरदर एक सयदेखि ३ सय जना सम्म कोरोना संक्रमित थपिएरहेका छन् । बाँकेमा दैनिक कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको सरदर चार जना रहेको छ । दैनिक कम्तिमा एक जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भइरहेको छ । कोरोनाको कहर बढ्दै भएपछि बाँकेको नेपालगन्ज लकडाउनको अवस्थामा छ । यस्तै कोहलपुर नगरपालिकामा आइतबार रातिदेखि लकडाउन घोषणा हुँदैछ । बाँकेमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या ७ हजार १ सय ९७ जना पुगेको छ । योसँगै बाँकेमा कोरोना जितेर घर फर्किनेहरुको संख्या ४९९१ पुगेका छन् । हालसम्म कोरोनाका कारण ८६ जना भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । बाँकेमा सीमा नाकामा कडाई देखि कोरोना रोकथाम बारे पूर्व तयारी आवश्यक छ । यसैविषयमा पछिल्लो समय बाँकेको कोरोना संक्रमणको अवस्था, समस्या चूनौति र आगामी बाटोका विषयमा इमेलखबरले बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालसँग गरेको कुराकानी –
१.पछिल्लो समय बाँकेको कोरोना संक्रमणको अवस्थाका विषयमा जानकारी गराइदिनुन ?
बाँकेमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको अवस्था बढ्दै गइरहेको अवस्था छ । त्यसको लागि नाकालाई व्यवस्थित बनाउने पहल भइरहेको छ । अस्पतालहरुमा बेड थप्ने, भेरी अस्पताल र नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा २÷२ सय बेड थप्न प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । यसमामा आइसियू र अक्सिजनको अभाव देखिएको छ । बाँकेमा अहिले सहयोग अभियान समेत चलिरहेको छ । यस्तै हामीले केन्द्र सरकारसँग पनि जनशक्ति र अक्सिजन माग गरेका छौ । बाँके जिल्ला प्रशासन सक्रिय रुपमा लागिपरेको छ ।
२. कोरोनाको अवस्था भयावह बन्दै गएको छ, नाका पुरै शिल गर्ने अवस्था भइनसकेको हो र ?
अहिले हामी कोरोना सँग एकप्रकारको युद्ध लडिरहेका छौ । बाँकेको अवस्था नाजुक हुदै गइरहेको अवस्था हो । अहिले भारतबाट बाँकेको जमुनाहा नाका हुँदै फर्किनेहरुको संंख्या धेरै छ । दैनिक सरदर ४ देखि ६ हजार नेपालीहरुको भारतबाट फर्किन्छन् । नाका शिल हामीले गर्न मिल्दैन । केन्द्र सरकारले गर्ने हो । तर हामीले सिफारिस गरेका छौ । बाँकेमा कोरोना संक्रमण फैलिनुको एउटा कारण नाका पनि हो । उनीहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
३. अहिले नेपालगन्जमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ, कोहलपुरमा समेत आजदेखि लकडाउन हुदैछ, जिल्ला भरी हुन्छ या हुँदैन ?
हामीले लकडाउन गर्ने अधिकार छैन । निषेधाज्ञा मात्रै गरेका हौं । स्थिति भयावह हुँदै गए केन्द्र सरकारको निर्देशनमा लकडाउन पनि होला ।तर, अहिले नियन्त्रणका लागि हाम्रो तर्फबाट निषेधाज्ञा जारी गरेका हौं । तत्कालको परिस्थिति नियन्त्रणमा लिनका लागि हामीले एक हप्ते निषेधाज्ञा जारी गरेका हौं । सबै मिलेर यो बढ्दो दरलाई चेन ब्रेक गर्न सकिन्छ कि भन्ने हो ।अवस्था हेरेर अगाडिका निर्णयहरू हुनेछन् । सबै नागरिकलाई सचेतना अपनाउँदै भीडभाड नगर्न भनेका छौं । निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने जो कोहीलाई कारबाही हुन्छ । त्यसका लागि सुरक्षाकर्मी खटाएका छौं ।अवस्था सुधार भएन भने हाम्रो तर्फबाट निषेधाज्ञा बढाउँछौं । त्यसपछि केन्द्र सरकारसँग लकडाउन लगाउनका लागि अनुमति पनि माग्छौं ।
४ .बाँके जिल्लामा लामो समय निषेधाज्ञा वा लकडाउन गर्नुपर्ने देखिन्छ तयारी के छ ?
तत्कालको परिस्थिति नियन्त्रणमा लिनका लागि हामीले एक हप्ते निषेधाज्ञा जारी गरेका हौं । सबै मिलेर यो बढ्दो दरलाई चेन ब्रेक गर्न सकिन्छ कि भन्ने हो ।अवस्था हेरेर अगाडिका निर्णयहरू हुनेछन् । सबै नागरिकलाई सचेतना अपनाउँदै भीडभाड नगर्न भनेका छौं । निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने जो कोहीलाई कारबाही हुन्छ । त्यसका लागि सुरक्षाकर्मी खटाएका छौं । अवस्था सुधार भएन भने हाम्रो तर्फबाट निषेधाज्ञा बढाउँछौं । त्यसपछि केन्द्र सरकारसँग लकडाउन लगाउनका लागि अनुमति पनि माग्छौं ।यो बढ्दो संक्रमणको अवस्थालाई नियन्त्रणमा राख्न स्वास्थ्य संस्थाहरूको कस्तो तयारी छ ? अब कोरोनाका गम्भीर प्रकृतिका बिरामी आए त्यहाँ राख्न मुस्किल नै हुने भएको छ । त्यहाँ बेड संख्या बढाउन छलफल पनि भइरहेको छ ।
५. बाँकेको अहिलेको अवस्था हेर्दा कोरोनाको प्रतिरक्षामा हामी कमजोर रहेछौँ भन्ने देखाएको छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाइले ?
त्यसो होइन, हामी यसमा गम्भीर छौ । मानिसहरुले उपचार नपाएर मर्न नपरोस भनेर नै हामीले जिल्लाको मुभलाई सक्रिय बनाएका छौ । यसमा स्थानीय सरकारले पनि गम्भीर रुपमा पूर्व तयारी गरिरहेको अवस्था छ । समुदाय स्तरमा समेत कोरोना फैलिरहेको छ । हाम्रो तर्फबाट सबै काम गरिरहेका छौ । जनशक्ति माग देखि व्यवस्थापनको लागि काम भइरहेको छ । मेरो आग्रह सम्पूर्णलाई तपाइहरुल स्वस्थ भइदिनुहोस् मेरो लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा त्यहि हो ।
बाँकेका प्रजिअ भन्छन
सभ्य र समृद्ध समाज निर्माणमा अग्रसर हुन महावीर जयन्तीले सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरोस्-राष्ट्रपति